अनमोल केसीको फिल्ममा किन डेव्यु नायिका मात्र ? (सुचिसहित) – Rajmarg Online
नायक अनमोल केसी सदाबहार नायक भुवन केसीका सुपुत्र हुन् । अनमोलले सन् २०१३ मा रिलिज भएको सुनिल रावलको फिल्म ‘होस्टेल’बाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा डेव्यु गरेका हुन् । पछिल्लो समय युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय अनमोलका भागमा सधै नयाँ अनुहार अर्थात नव नायिकाहरु पर्दै आइरहेका छन् । उनको आठौं प्रोजेक्ट ‘ब्याचलर बन्टी’मा पनि अव नव नायिका भित्रिने भएकी छिन् । उनी फेरि एकपटक नयाँ हिरोइनसँग जोडी बाँधिदै छन् ।
हरेक फिल्ममा नयाँ हिरोइनसँग रोमान्स गर्दै आइरहेका सुपरस्टार अनमोल केसी आठौं प्रोजेक्ट ‘ब्याचलर बन्टी’मा भने मिस एसिया २०१७ को बिजेता साथै मोडल उकुसा गिरीसँग रोमान्स गर्ने भएका छन् । यो संयोग मात्र हो कि अनमोलको माग यस्तै थियो यो विषयमा भने सबै अनविज्ञ छन् । तर जे होस उनीसँग जोडी बाधिएका सबै नायिकाहरुलाई भने अनमोलले पार लगाई दिएका छन् । सबै नायिकाहरु यतिबेला फिल्म क्षेत्रमै सक्रिय छन् । को को थिए त ती भाग्यमानी ७ नायिकाहरु ? जो अनमोलसँग जोडी बाधिएका थिएः
फिल्म होस्टेल अनमोल केसी अभिनित डेव्यु फिल्म हो । यसै फिल्मबाट नायकका रुपमा उनी रजतपटमा भित्रिएका हुन् । यस फिल्ममा उनी नायिका रिस्ता बस्नेतसँग रोमान्स गरेका छन् । यो फिल्म रिस्ताको पनि डेव्यु फिल्म थियो ।
फिल्म जेरी अनमोल अभिनित दोस्रो फिल्म हो । यो फिल्ममा पनि उनी नायिका आना शर्मासँग जोडी बाधिएका छन् । आनाको यो डेव्यु फिल्म थियो । यस फिल्म ‘जेरी’को सुटिङ समय देखि रिलिज समयसम्म आना र अनमोल प्रेम सम्बन्धमा रहेको हल्ला समेत फिल्म क्षेत्रमा थियो ।
ड्रिम्स अनमोल अभिनित तेस्रो फिल्म हो । यस फिल्ममा अनमोल साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मि शाहसँग जोडि बाधिएका छन् । यस फिल्म साम्राज्ञीको डेव्यु फिल्म थियो । यो जीडीलाई दर्शकले निकै रुचाएका पनि थिए । अझै यी दुई जोडीलाई दर्शक पर्दामा हेर्न इच्छुक छन् ।
फिल्म गाँजलु अनमोल अभिनित चौथो फिल्म हो । यस फिल्ममा अनमोल पुर्व मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठसँग जोडी बाधिएका छन् । यो श्रृष्टिको डेव्यु फिल्म हो । कुमारिको कथामा बनेको यस फिल्म बक्सअफिसमा ठिकठाककै रह्यो ।
फिल्म कृ अनमोल अभिनित पाँचौ फिल्म हो । यस फिल्ममा अनमोल मोडल अदिति बुढाथोकीसँग जोडी बाधिएका थिए । यो फिल्म अदितिको डेव्यु फिल्म हो । यस फिल्ममा अनमोलले शुभचिन्तकहरुबाट लुक्स र मेहनतको खुव तारिफ समेत पाए ।
फिल्म क्याप्टेन अनमोल अभिनित छैटौं फिल्म हो । यस फिल्ममा उनी उपसना सिंह ठाकुरसँग जोडी बाधिएका छन् । यो उपसनाको डेव्यु फिल्म हो । यस फिल्मकोे पोष्ट पोड्रक्सनको काम भइरहेको छ । फिल्म प्रर्दशनको क्रममा छ ।
७) ए मेरो हजुर ३
फिल्म ए मेरो हजुर ३ अनमोल अभिनित सातौ फिल्म हो । यस फिल्म उनी नायिका तथा निर्देशक झरना थापाकी छोरी सुहाना थापासँग जोडी बाधिएका छन् । सुहानाको यो डेव्यु फिल्म हो ।By News24Nepal.TV